Thit Htoo Lwin: 12/18/11 - 12/25/11
ပေါက်ကွဲမီးလောင်မှုအတွင်း သေဆုံးသူနာမည်စရင်း နှင့် နောက်ဆုံးရ သတင်းဓါတ်ပုံများ
၁။ မောင်စိုင်းမောင်မောင် (၃) နှစ် ၂။ မောင်မောင်ကြီး (၁၀)နှစ် ၃။ မောင်သိန်းဇော် (၉) နှစ် ၄။ မစ၀်ခွန်ချို (၅) လ ၅။ မပုံ့ပုံ့ (၂၁) နှစ် ၆။ မယုဇအောင် (၂၃) နှစ် ၇။ ဦးသိန်းစိုး (၅၀) နှစ် ၈။ ကိုသန်းလှိုင် (၃၆) နှစ် ၉။ မယဉ်ယဉ်စန်း (၃၄) နှစ် ၁၀။ မရီလွင် (၃၃) နှစ် ၁၁။ မနွယ်လေးဟန်(၇) နှစ် ၁၂။ ဦးစိုင်းလင်း (၅၅) နှစ် ၁၃။ မောင်အောင်အောင်(၂၈)နှစ် (မီးသတ်) ၁၄။ မောင်မျိုးကျော်ကျော် (၂၀) နှစ် (မီးသတ်) ၁၅။ ဦးပြည်ဇော်ဌေး( ၅၀) နှစ် (မီးသတ်) ၁၆။ မောင်သော်ဇင်မျိုးထက် (၂၁) နှစ်(မီးသတ်) ၁၇။ ဦးတင်စိုး (၃၄) နှစ် (မီးသတ်) ၁၈။ PR (လူ့အသားစများ) အထက်ပါစာရင်းမှာ တာမွေရဲစခန်းမှ နောက်ဆုံးရစာရင်းဖြစ်ပါသည်။ အမှတ်စဉ် ၁၃ မှ ၁၇ အထိ ၅ ဦးမှာ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည်။ နံပတ် ၁၈ မှာ ကောက်ယူရရှိသည့် လူ့အသားစများကို စုပေါင်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိပါကလည်း ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။ နောက်ဆုံးရသတင်းအရ လူနာစုစုပေါင်းမှာ ကျား- (၆၈) ဦး၊ မ- (၁၆) ဦး ဖြစ်ပြီး ယင်းလူနာများကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အဆောင်(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈) ၊ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးရုံကြီး၊ အလုပ်သမားဆေးရုံကြီးတို့တွင် တင်ပို့ ကုသလျှက်ရှိသည်။
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက် ကူးတို့ဆိပ်လမ်းအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သော ပေါက်ကွဲမှု ကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားရသည့် ဒုက္ခသည်များကို ပထမထားရှိရာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖြစ်သည့် သမိန်ပရမ်းလမ်းမပေါ်ရှိ မဟာဝိဇယဘုန်းကြီးကျောင်းမှ အနီးအနားရှိ အ.မ.က ၂၀ နှင့် ၂၄ တို့သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အဆိုပါဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နှစ်ပေါင်း ၁၃၀ ခန့်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်သဖြင့် လူအုပ်ဒဏ်ကို မခံနိုင် မည်စိုးသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းနေရာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် မီးသတ်ဝန်ထမ်းများထံမှသိရသည်။ ထို့အပြင် ဒုက္ခသည်များအတွက် အစားအသောက်၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း များကို ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရဘက်မှ အများအပြားလာရောက်လှူဒါန်းနေကြသဖြင့် လိုအပ်ချက်များမရှိသလောက်ရှိကြောင်း ကယ် ဆယ်ရေးစခန်းရောက် ဒုက္ခသည်များထံမှသိရသည်။ "ပစ္စည်းတွေက သယ်လို့တောင်မနိုင်ပါဘူး။ နောက်နေ့အတွက် အစားအသောက်တွေတောင် ပိုလျှံနေပါတယ်။ အစစတော့ပြည့်စုံပါတယ်။ အိမ်တွေကိုလည်း ပြန်ချပေးမယ်ကြားနေတယ်" ဟု အဆိုပါရပ် ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းရောက် အသက် ၄၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးကပြောသည်။ ထူးကုမ္ပဏီအပါအ၀င် နာမည်ကြီးပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများကလည်း အစားအသောက်နှင့် အဝတ် အထည်များအပြင် ငွေကြေးများကိုပါ အများအပြားထည့်ဝင်လှူဒါန်းထားကြသည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးများထံမှသိရသည်။ သေဆုံးသွားသော မီးသတ်ဝန်ထမ်းငါးဦးအတွက် တစ်ဦးလျင် ကျပ် ဆယ်သိန်းစီ ထူးကုမ္ပဏီက လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွင် ရောက်ရှိနေကြသည့် ဒုက္ခသည်များအတွက် သိန်းတစ်ရာ့ငါးဆယ်နှင့် ဆေးရုံများသို့ရောက်ရှိကြသည့် ဒဏ်ရာရသူများအတွက် ကျပ်သိန်း တစ်ရာကိုလှူဒါန်းထားကြောင်းသိရသည်။
တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံးခဲ့ရသော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးအတွက် ဂုဏ်ပြုဈာပနအခမ်းအနား (ဓါတ်ပုံ)
တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံးခဲ့ရသော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးအတွက် ဂုဏ်ပြုဈာပနအခမ်းအနားကို ယနေ့ညနေ ၅ နာရီဝန်းကျင်တွင် ရေဝေးသုဿာန်၌ ကျင်းပနေစဉ်။
12/29/2011 07:09:00 PM
NLD နှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုး မီးဘေးသင့်ပြည်သူများကို ကူညီ
မီးဘေးသင့် ဒုက္ခသည်များကို နိုင်ငံရေးပါတီ ၂ ခုနှင့် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများက ကူညီလှူဒါန်းလျက်ရှိသည်။
ဖွင့်လှစ်ထားသော မဟာဝိဇိယရာမကျောင်းတိုက်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က မြင့်မြတ်သောနှလုံးသား(Nobel Heart)အမည်ဖြင့် ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ကာ လူနာများအား ကူညီပေးနေပြီး၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလည်း ဖြိုးစေတနာ ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ကာ ကူညီကုသပေးလျက်ရှိသည်။
ထို့အပြင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က နံနက်စာအတွက် ထမင်းထုပ် ၁၀၀ လှူဒါန်းပြီး၊ခေါက်ဆွဲခြောက်၊ အ၀တ်အထည်နှင့် ဒန်အိုးဒန်ခွက်များ ဆက်လက်လှူဒါန်းမည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
တာမွေမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကလည်း လူ ၅၀၀ စာအတွက် ထမင်းထုပ်များ လှူဒါန်းနေသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌက လူ ၁၂၀၀ အတွက် ထမင်းထုပ်များ လှူဒါန်းခဲ့သည်။ လူမှုရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သော BG သွေးလှူဒါန်းသောအဖွဲ့ကလည်း သွေးလှူဒါန်းမှုများကို ပြုလုပ်နေပြီး၊ ရဲတိုက်ဖောင်ဒေးရှင်းကလည်း အခင်းဖြစ်ပြီးစတွင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဒုက္ခသည်များ အတွက် ရေသန့်ဗူးလှူဒါန်းကာ အရေးပေါ် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ထပ်မံလှူဒါန်းရန် သွားရောက်နေသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီကလည်း ကျပ် ၁၀ သိန်းလှူဒါန်းသည်။
နာမည်ကျော်သူဌေးကြီးများဖြစ်သော ဦးဇော်ဇော်ပိုင် (Max Myanmar) ကုမ္ပဏီနှင့် ဦးတေဇ၏ ထူးဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကလည်း လိုအပ်သည်များ လှူဒါန်းရန် လာရောက်လေ့လာခဲ့သည်။
ဒုက္ခသည်များအတွက် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့်လှစ်ထားသော မဟာဝိဇိယရာမကျောင်းတိုက်သို့ လွတ်လပ်စွာ လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်းလည်း ကြေညာထားပြီး၊ တစ်ဦးချင်းစေတနာရှင်များလည်း လာရောက်လှူဒါန်းနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တာမွေမြို့နယ်၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ မီးသတ် ရဲဘော်ငါးဦး၏ ဈာပနကို နေ့ချင်းသဂြုင်္ိဟ်
၂၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက်၊ ကူးတို့ဆိပ် လမ်းရှိ ဂိုဒေါင်များ မီးလောင် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ရင်း ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားခဲ့သည့် တာမွေမြို့နယ်၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ မီးသတ် ရဲဘော်ငါးဦး၏ ဈာပနကို ယနေ့ ညနေက ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အအေးတိုက်မှ ရေဝေးသုသာန်သို့ ပို့ဆောင်ပြီး နေ့ချင်းသဂြုင်္ိဟ် ခဲ့သည်။ သေဆုံးသွားသော မီးသတ်ရဲ ဘော်များမှာ တပ်ကြပ်ကြီးဇော်ဌေး (၅ဝနှစ်)၊ တပ်သား သော်ဇင်မျိုးထက်
(၂၁နှစ်)၊ တပ်သား အောင်အောင်(၂၈နှစ်)၊ တပ်သားမျိုးကျော် ကျော်(၂ဝနှစ်)နှင့် တပ်ကြပ် တင်စိုး (၃၄နှစ်)တို့ ဖြစ်သည်။ နိုင်လင်း (ပေါ်ပျူလာဂျာနယ်) သစ်ထူးလွင်
12/29/2011 06:53:00 PM
NLD အဖွဲ့ ဝင်များ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ ကူညီမှုများပြုလုပ်ရန်ရောက်ရှိနေပြီ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ( NLD ) မှ ဥက္ကဌ ဦးတင်ဦး ကိုယ်တိုင်လာရောက် အားပေးပြီး မီးဘေးသင့်ပြည်သူ ၄၅၀ အတွက် အစားအသောက်များ ကို ပေးအပ် ခဲ့ကြောင်း မီးဘေးသင့် ပြည်သူတစ်ဦး က ပြောသည်။ ဓါတ်ပုံ - The Voice Weekly
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးရှိ အရေးပေါ်နှင့်ပြင်ပလူနာအထူးကုငှာန သို့ဒဏ်ရာရရှိသူများ ကိုလာရောက်ပို့ဆောင်စဉ်။
ဒေါက်တာမျိုးအောင်ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်ရှိ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ ကူညီမှုများပြုလုပ်ရန်သွားရောက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လိုအပ်လာပါက ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ပြီး ကူညီကုသမှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း NLD မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ယနေ့မွန်းလွဲ ၁း၃၀ တွင် The Messenger Journal သို့အတည်ပြုပြောကြားသည်။
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာတွင် ရှိခဲ့သောလူတိုင်း သတိပြုရန်
ဆာလဖျူရစ် အက်ဆစ် ၏ လောင်စားမှု ဘေးအန္တရာယ် သည် အချိန်ဆိုင်းပြီးမှ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာနေရာတွင် ၀တ်ဆင်ခဲ့သော၊ ပေကျံနေသော အ၀တ်အစားနဲ့ ဖိနပ်များ ကို လဲလှယ်ဝတ်ဆင်ပါ။
မီးခိုးငွေ့ ၊အက်ဆစ်ငွေ့ရှုခဲ့မိသူများအတွက်
ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရာနေရာ သို့ ရွှေ့ ပြီး လူနာကို ဆေးရုံ သို့ အမြန်ဆုံး ပို့ ပါ။
ဓာတုပစ္စည်းများ နဲ့ မိမိအရေပြားနဲ့ ထိတွေ့ ခဲ့မိသည် ဟု သံသယရှိပါက
ပေကျံနေသော၊ ၀တ်ဆင်ထားသော အ၀တ်အစားများ ကို ချက်ချင်းချွတ်ပြီး တကိုယ်လုံး ကို ရေစစ်စင်ချိုးပစ်ပါ။
မျက်လုံးများ ကို ရေအေးများများနဲ့ အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်ခန့်မျက်လုံးများ ဖွင့်ပြီး ရေဆေးပါ။
အက်ဆစ်များ ပါးစပ်ထဲသို့ ဝင်ခဲ့သည် ဟု ယူဆပါက
အော့အန်ထုတ်ခြင်း၊ အော့အန်ထုတ်ရန် ကြိုးစားခြင်း မပြုလုပ်ပါနဲ့ ။
လူနာ သည် ကောင်းကောင်းသတိရပါက ရေအေးအေးဖြင့် ပလုတ်ကျင်းပစ်ပါ။
ထိုနောက် လူနာကို ဆေးရုံသို့ ချက်ချင်းပို့ ပါ။
ထိုကြောင့် မီးလောင်ဒဏ်ရာရှိပါက သို့ မဟုတ် မိမိကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင်္ကာမကင်းဖြစ်ပါ က ဆေးရုံသို့ ချက်ချင်းသွားရောက်ပြသပါ။
အောက်ပါ First aid information in Sulphuric acid burn ကို သင့်တော်သလို မြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆိုပါသည်။
First aid information (ICSC, 2000; ARKEMA MSDS, 2003)
The corrosive action of sulphuric acid can appear afteracertain delay: it is
important to take immediate action.
Immediately remove all soiled or spotted clothes, including shoes.
- Move the victim into the open air and lie them down.
- Prop the person up toahalf-sitting position.
- Apply artificial respiration if necessary.
- Transfer to hospital immediately.
- Rinse with plenty of water at length while rapidly removing soiled clothes in the shower.
- Finish cleaning withaneutralising solution (5 to 10 % triethanolamine solution).
- In the event of extensive burns, transfer to hospital immediately.
- Immediately wash the eyes with plenty water for at least 15 minutes, keeping the eyelids open.
- Consultaspecialist.
- Rinse the mouth and lips with water if the person is conscious.
Where necessary, contact the nearest poison control centre (cf. page 4).
by Htein Aung သစ်ထူးလွင်
အပြင်းထန် ဆုံးပေါက်ကွဲမီးလောင်မှုအတွင်း လူ ၄၁ ဦးပျောက် ဆုံးနေဆဲ ဗုံးထောင် ဖောက်ခွဲတာ လို့မှုခင်းရဲ တပ်ဖွဲ့ မှ ယူဆ
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ကုတို့ဆိပ် ရပ်ကွက်ရှိ မေတ္တာမွန် ဂိုဒေါင်ဝင်း အတွင်း ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက် ၂ နာရီ အချိန်၌ အပြင်းထန် ဆုံးပေါက် ကွဲမီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဂို ဒေါင်ဝင်း အနီး နေထိုင်သူ ၁၁ ဦးနှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး တို့ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
အဆိုပါနေ့ နံနက် ၁ နာရီ ၄ဝ မိနစ် အချိန်ခန့်၌ ကုတို့ဆိပ် ရပ်ကွက် အတွင်းရှိ မေတ္တာမွန် ဂိုဒေါင်ဝင်း အတွင်း မီးလောင်မှုဖြစ် ပွားရာ ပတ်ဝန်းကျင် တွင် နေထိုင် သူများက ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မီးသတ် ဦးစီးဌာနသို့ အကြောင်းကြား ခဲ့ကြောင်း၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ မီး သတ်ယာဉ် ၃ စီးဖြင့် အဆိုပါ နေရာ သို့ ရောက်ရှိ မီးငြှိမ်းသတ်စဉ် နံနက် ၁ နာရီ ၅၅ မိနစ်အချိန်၌ တိုင်းရင်း ပရဆေးများ သိုလှောင်ထားသော ဂိုဒေါင် အမှတ်(၇၉)မှ စတင်၍ ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး နံနက် ၂ နာရီ အချိန်၌ ဒုတိယ အကြိမ် ထပ်မံပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ထိုသို့ ပေါက်ကွဲမီးလောင်မှု ကြောင့် လူနေအိမ်ခြေ ၁၂ လုံး၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်း၊ ဖြိုး စေတနာ အခမဲ့ ဆေးခန်းတစ်ခါန်း၊ ဝန်ထမ်း တန်းလျားနှစ်ခုတို့ ပြိုကျ ပျက်စီးခဲ့ပြီး ပစ္စည်းများ သိုလှောင် ထားသည့် ဂိုဒေါင် ၁၇ လုံးနှင့် မီးသတ်ယာဉ် ၃ စီး မီးလောင်ပျက် စီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးမှ ရရှိ သောစာရင်း များအရ အဆိုပါ ပေါက်ကွဲ မီးလောင်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ ကျား ၁၁ ဦးနှင့် မ ၅ ဦး၊ ဒဏ်ရာ ရသူ ကျား ၆၂ ဦးနှင့် မ ၁၇ ဦး ရှိကြောင်း၊ ၄င်းအပြင် ကျား ၂၆ ဦးနှင့် မ ၁၅ ဦးတို့မှာ ပျောက်ဆုံး လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထိုပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အိမ်ထောင်စု ၁၉၂ စုမှ လူဦးရေ ၉၂၆ ဦးမှာ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာမှ ကုတို့ဆိပ် ရပ်ကွက်ရှိ မဟာဝိဇရကျောင်း၌ ကယ် ဆယ် ရေးစခန်း ဖွင့်ကာ ကူညီစောင့်ရှောက် ထားကြောင်း သိရသည်။
”ဒီလို ပေါက်ကွဲမှုမျိုးကို အရင် က ရန်ကုန်မြို့မှာ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး။ အဓိက အခုလို လူအသေ အပျောက်နဲ့ ပျက်စီးမှု များသွားရ တာကမီးလောင်မှုကြောင့် မဟုတ် ဘဲ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အဓိက အခုလို ဖြစ်သွားရတာ။
လောလောဆယ် ပေါက်ကွဲတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုတော့ ရှာနေတုန်းပဲ။ တွေ့ရှိတဲ့ အနေအထား အရတော့ ဖြစ်နိုင် တာက နှစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ခုက ပရဆေးတွေ ဓာတ်ပြုပြီး မီးလောင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရေနဲ့ထိပြီး ပေါက်ကွဲသွားတာရယ်၊ ဗုံးထောင် ဖောက်ခွဲတာရယ်။ ဒီအထဲ မှာမှ ဖြစ်နိုင်ခြေ အများဆုံးက ဗုံး ကြောင့် ပေါက်ကွဲတာ အများဆုံးဖြစ် နိုင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဂိုဒေါင်ရဲ့အောက်ခြေ မြေပြင်မှာ အနက် ၁ဝ ပေ၊ အကျယ် ၁၅ ပေ လောက်ရှိတဲ့ တွင်းကြီးတစ်ခု ကျန် ခဲ့တဲ့အပြင် ဂိုဒေါင်စောင့်တဲ့ လုံခြုံ ရေးတွေကို စစ်ဆေးချက် အရ ဒီဂို ဒေါင်ဝင်း အတွင်းမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ရက်လောက် ကစပြီး အခုဖြစ်ပွား တဲ့ အချိန်အထိ လူငယ် ၅ ဦး လာ ရောက် နေထိုင်ပြိး ချက်ပြုတ်စား သောက်ကြတယ်လို့ သိရတယ်။ အခု အဲဒီ လူငယ် ၅ ဦးကိုလည်း လိုက်ရှာနေပါတယ်” ဟု မှုခင်းရဲ တပ်ဖွဲ့မှ အကြီးတန်း ရဲအရာရှိကြီး တစ်ဦးက ပြောသည်။
စက်ဆန်းမီးကြောင့် အိမ်ထောင်စု ၁၀၈၀ စု၊ ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုး သိန်း ၁၁၃၆၊ ပျက်စီးအိမ် ၁၂၄ လုံးရှိကြောင်းသိရ
အက်ဆစ်ကန် အနီး မီးငြှိမ်းသတ်နေသည့် မီးသတ်ဝန်ထမ်းများ မီးလောင်မှုအပြီး
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ သိုလှောင်ပစ္စည်းများ အပူလွန်ကဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။ “လုံခြုံရေး မီးတစ်လုံးပဲရှိတဲ့နေရာက ၀ါယာရှောခ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ၀ါယာရှော့ခ်ဆိုရင် ဖြူးပြတ်ရမယ်။ ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုအရ ၀ါယာရှော့ခ်လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး”ဟုမင်္ဂလာတောင်ညွန့် လျှပ်စစ် (၂)မှ လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ ဦးတင်ထွန်းက သုံးသပ်သည်။ နောက်ဆုံးရရှိသော သတင်းအရ အိမ်ထောင်စု ၁၀၈၀ စု၊ ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုး သိန်း ၁၁၃၆၊ ပျက်စီးအိမ် ၁၂၄ လုံးရှိကြောင်းသိရသည်။ နေအိမ်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးရခြင်းမှာ မီးလောင်မှုကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အောင် ပေါက်ကွဲခဲ့သည့် အက်ဆစ်ကန်နေရာကို တွေ့ရစဉ်။ ပေါက်ကွဲမှူကြောင့် မြေတွင်းကြီးမှာ ၁၀ ပေခန့်အနက်ရှိသည်။ထိုကျင်းအနီးတစ်ဝိုက်ရှိ (ပေ ၅၀၀ခန့်အတွင်းရှိ) အဆောက်အအုံအားလုံး နီးပါးမှာလည်း မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခံရသည့်အလား ပြိုကျပျက်စီးနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
သည့် မဟာဝိဇယာရာမ ဘုန်းကြီးကျောင်း မှ ကလေးငယ်တစ်ဦး။
ခေါင်းထိသွားတယ် ကျွန်တော့်ညီမလေးထိမှာဆိုးလို့ ကာပေးလိုက်တာ ဆရာဝန်တွေ အခမဲ့ ကုသပေးပါတယ် “ဟု ကတိုးရပ်ကွက်နေ အသက် ၁၂နှစ်ဝန်းကျင်ကလေးငယ် တစ်ဦးက ပြောသည်။
ဆေးဝါးအတွက်ကတော့ လာပြီးကူညီပေးကြပါတယ် အစားအသောက်ကလည်း သိပ်မပူရသေးဘူး အခုလိုအပ်နေတာက အ၀တ်အထည်ပေါ့ သူတို့က မီးပေါက်ကွဲမှုစဖြစ်တော့ အ၀တ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ ပြေးလာတော့ ဘာမှ ယူချိန်မရဘူး ဆောင်းတွင်းဆိုတော့လဲ အေးတော့ သူတို့အတွက် အ၀တ်အစားတို့ စောင်တို့ ခြင်ထောင်တို့ လိုအပ်တယ်” ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် ကိုလှဌေးက ပြောသည်။
မျက်နှာချင်း ဆိုင်တွင်ရှိသော ကူးတို့ ဆိပ်ရပ်ကွက် သည် မီးကူး စက်လောင်ကျွမ်းခြင်း မခံခဲ့ရသော်လည်း၊ ကုန်လှောင်ရုံအတွင်း ပေါက်ကွဲ မှုအရှိန်ကြောင့် အိမ်ခြေ၂၅၀ ခန့် ပြိုလဲပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး အဆိုပါရပ်ကွက်မှ ဒေသခံများသည် ပုသိမ်ညွှန့် ရာကျော်ကျောင်းတိုက်တွင် ထားရှိထားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
12/29/2011 11:12:00 AM
Michael Aris, Aung San Suu Kyi and
their first son Alexander, in 1973 Photo: ARIS FAMILY COLLECTION/GETTY
ကျနေတဲ့ နှင်းဖွဲလေးတွေကို ကြည့်ရင်း နှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ ဘူတန်နိုင်ငံ က
တောင်တန်းတွေ ကို ကိုယ် သတိရမိတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကိုယ်က ဘူတန်ဘုရင်မိသားစုဝင်တွေ ကို
စာသင်ပေးနေတဲ့အချိန်၊ စု ကတော့ တော်ဝင်နိုင်ငံခြားရေးရာဌာနမှာ
သုသေသနပြုလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ ။ ဟိမ၀န္တာတောင်ပြာတန်းကြီးတွေရဲ့
အရိပ်အောက်မှာ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက် အပူအပင် ကင်းကင်းနဲ့အများအကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေကို
လုပ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ ကြတယ်လေ။ မင်းကို
ချစ်ရေးဆိုခဲ့တုန်းက၊ တခြားမိန်းကလေးတွေလို “ချစ်ပါတယ်” ဆိုတဲ့ အဖြေစကား မျိုး ကို
အနှောင်အဖွဲ့ ကင်းကင်းနဲ့ရခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ “မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အရေးကို
ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာတဲ့ အချိန်မှာ ပြည်တွင်းကို ပြန်ပြီး မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်ဖို
့ ခွင့်ပြုရမယ်” ဆိုတဲ့ သဘောတူညီမှု အရင်ရပြီးမှ သာ ကိုယ့်အချစ် ကို မင်းက
လက်ခံခဲ့တာလေ။ အဲဒီအချိန်ကတည်းက မင်းရဲ့ နှလုံးသားမှာ တိုင်းပြည်နဲ့ 
မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ သာ ပထမ နေရာမှာ ရှိနေခဲ့တယ် ဆိုတာကို ကိုယ် ကောင်းကောင်း နားလည်
သဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ မင်းရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အတွက် နားလည်မှုရှိစွာနဲ
့ပါရမီဖြည့်ပေးဖို့ လဲ ကိုယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ Photo: internet
့ရဲ့ အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၁၆ နှစ်သာ ကာလမှာ မင်းဟာ ဇနီးကောင်း၊ မိခင်ကောင်း ပီသစွာနဲ
့ အိမ်ထောင်တာဝန်ကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း တာဝန်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ အလုပ်တာဝန်က တဘက်နဲ့ 
အိမ်ကို အမြဲတမ်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ထားတတ်တဲ့ အကျင့်၊ ကလေးတွေအတွက်
မွေးနေ့တွေ၊ ပျော်ပွဲရွင်ပွဲတွေကို မပျက်မကွက် လုပ်ပေးခဲ့ အကျင့် တွေကြောင့်
ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကြားမှာ မင်းဟာ စံပြအိမ်ရှင်မ ဖြစ်လို့နေခဲ့တယ်။
အသက် ၁၂နှစ်နဲ့၁၄ နှစ်အရွယ်ကို ရောက်လာတဲ့အခါ၊ မင်းမေမေ ( ဒေါ်ခင်ကြည်) နေထိုင်မကောင်း
ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ဖုန်းရပြီး၊ မြန်မာပြည်ကို မင်းပြန်သွားခဲ့ရတယ်။ အဲဒီခရီးဟာ
ကိုယ်တို့့မိသားစုရဲ့ ကွဲကွာခြင်းအစလို့ကိုယ်တို့အားလုံး ကြိုတင် မသိထားခဲ့ကြဘူးနော်။
မင်းဟာ…အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်းတစ်ဦးအဖြစ်၊ မိခင်ကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်ရုံတင်မက ပါဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးကောင်းတစ်ယောက် လဲ ဖြစ်လို့နေပြန်ပါရောလား။ မေတ္တာတရားပြည့်ဝတဲ့ မိခင်တစ်ဦးဘ၀ကနေ၊
နူးညံ့သိမ်မွေ့ တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး အဖြစ်ကနေ တိုင်းပြည်က လိုအပ်လာပြီဟေ့ ဆိုတဲ့အခါမှာ
ကြမ်းတမ်းတဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ကူးပြောင်းပြီး လူထုကို
့ ရော၊ အိမ်ထောင်ရှင်မ တစ်ဦးအနေနဲ့ ပါ သားတွေကို စွန့် ၊ ခင်ပွန်းကို ထားသွားပြီး
နိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့ မင်းရဲ့ ပြတ်သားတဲ့ လုပ်ရပ်ကို မင်းသူငယ်ချင်းအချို့က
နားမလည်စွာနဲ့ပြောဆိုဝေဖန်ကြတိုင်း သားငယ်ကင်မ်က “မေမေဟာ သူလုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကို
လုပ်နေတာပါ” လို့ပြန်ပြောလေ့ရှိတယ်။ “ကျွန်မသားတွေ ကျွန်မကို လိုအပ်နေကြမှာကို
ကျွန်မ အကြောက်ဆုံးပဲ” လို့မင်းပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပြီး၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ငန်းတစ်ခုတည်း
အပေါ်အာရုံထားဖို့ ၊ ကလေးတွေ အတွက် မပူပန်ဖို့ဖုန်းထဲကနေ ကိုယ့်ပြောစကားတွေ ဟာ ကလေးတွေ
အပေါ်တာဝန်ကျေချင်လွန်းတဲ့ မင်းအတွက် စိတ်ဖြေစရာ ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကိုယ်ထင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်တွင်းက အခြေအနေတွေ ဖရိုဖရဲ
ဖြစ်နေချိန်မှာ၊ အထူးသဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးတွေ၊ သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေ ညံ့ဖျင်းလွန်းတဲ့ ကာလဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်တို
့သားအဖတွေဟာ မင်းရဲ့လှုံခြုံရေးအတွက် အချိန်နဲ့အမျှ စိုးရိမ်ပူပန်နေခဲ့ကြရပါတယ်။
ဖုန်းသံကြားတိုင်း မင်းဆီက ဒါမှမဟုတ် မင်းအကြောင်းပြောနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ယောက်ဆီက
ဖုန်းလားလို့အမြဲမျှော်မိခဲ့ကြတယ်။ “မေမေဘယ်တော့ ပြန်လာမလဲ” ဆိုတဲ့ ကလေးတွေ
အမေးကို ခနခနဖြေရတိုင်း ကိုယ့်ရင်မှာ မချိပါဘူး။ မပြောကောင်း မဆိုကောင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို မင်းကို လုပ်ကြံကြမှာကိုလည်း စိုးရိမ်မိပါတယ်။
စိုးရိမ်ပူပန်ရလွန်းတဲ့ အတွက်.. မင်းကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချလိုက်ပြီ လို့သတင်းတွေ
ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အချိန်မှာ အနည်းဆုံး အိမ်ထဲမှာ အသက်အန္တရာယ်တော့
မစိုးရိမ်ရတော့ဘူးပေါ့ ဆိုပြီး ကလေးတွေကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်လို့ကိုယ်ဖြေတွေးတွေးခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရပိုင် သတင်းစာတွေထဲမှာ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ထားတဲ့ အတွက် မင်းမှာ
အပြစ်ရှိကြောင်း ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာ တွေ ပေါ်ထွက်လာတိုင်း ကိုယ့်ကြောင့် မင်းရဲ
့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ထိခိုက်တော့မလား ဆိုပြီး စိုးရိမ်ခဲ့ရသလို၊ ကိုယ့်ကြောင့်
ပြောဆိုတိုက်ခိုက်ခံနေတာကို လည်း စိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်လို့ နေခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာ့အရေးအတွက် ကိုယ်လဲ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က ပါဝင်ဆောင်ရွက်ချင်တာမို့ 
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေကို နိုင်ငံတကာက ထောက်ခံအားပေးမှုတွေ ရလာအောင် နိုင်ငံရေး၊ဘာသာရေး
ပိုင်းမှာ လူသိများတဲ့ ပုဂိုလ်တွေ နဲ့ ကိုယ် တိတ်တဆိတ် သွားရောက်တွေ့ ဆုံပြီး စည်းရုံး
လှုံ့ ဆော်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ကို
မြန်မာအစိုးရ က သိသွားရင် မင်းကို ပိုပြီးထိခိုက်မှာ စိုးတဲ့အတွက် လျှို့ဝှက်စွာနဲ
့ ကိုယ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ သတင်းသမားတွေ၊ အင်တာဗျူး လာတောင်းတာတွေကို လဲ
့ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ကာလအတွင်း၊ အထီးကျန်နေမယ့် မင်းအတွက် ကောင်းနိုးရာရာ စာအုပ်တွေ
ပို့ ပေးခဲ့တယ်။ နယ်ဆလ်မင်ဒဲလားအကြောင်း၊ ဂန္ဒီအကြောင်း
အစရှိတဲ့ စာအုပ်တွေ ဟာ မင်းရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အထောက်အကူပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ 
ကိုယ်ထင်ပါတယ်။ အိမ်က နံရံမှာ မင်းပုံ ခပ်ကြီးကြီးတစ်ပုံကို ချိတ်ထားပြီး၊ ဧည့်ခန်းထဲမှာ မင်းအတွက် နိုင်ငံတကာက ချီးမြှင့်ထားတဲ့
ဆုတံဆိပ်မျိုးစုံ တွေရယ်၊ မင်းရထားတဲ့ နိုဘယ်ဆု အပါအ၀င် တခြားဆုတံဆိပ်တွေ
မျိုးစုံကို ကိုယ် ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ခင်းကျင်းပြင်ဆင်ထားတယ်။ စုရေ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘ၀နဲ့ 
အထိန်းသိမ်းခံဘ၀ဟာ မင်းအတွက် ရော၊ ကိုယ့်အတွက် ပါ အင်မတန်ရှည်လျားတဲ့ ကာလတွေပါ။
တခါတလေ မင်းအကြောင်း ဘာသတင်းမှ မကြားရတော့ပဲ လပေါင်းများစွာကြာသွားတဲ့ အခါတွေမှာ
လူမသိ သူမသိဘ၀နဲ့မင်းသေများသွားပြီလားလို့တွေးပူနေချိန်မှာ ဒေါ်စုအိမ်က
စနရားသံကြားရတယ်လို့သတင်းကြားလိုက်ရလို့ကိုယ့်မှာ ပြောမပြတတ်လောက်အောင်
စိတ်သက်သာရာရ သွားတဲ့ အကြိမ်တွေလဲ မနည်းခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ မင်းအသက်ရှင်နေကြောင်း
မျှော်လင့်လို့ ရတဲ့ စနရားသံတောင် မကြားရတော့ဘူး ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ် သွေးပျက်ခဲ့ရပါတယ်။
စနရားပျက်သွားတာပဲလား၊ ဒါမှမဟုတ် ငွေကြေးကြပ်တည်းလို့ ရောင်းလိုက်ရတာများလား
ဆိုပြီး တွေးပူရသေးတယ်။ ကိုယ့်ဇနီးသည် တစ်ယောက်တည်း အားငယ်နေချိန်၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ 
ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ ခင်ပွန်းသည်တစ်ယောက် အနေနဲ့ရှေ့ ကနေ မားမားမတ်မတ်ရပ်ပြီး၊
ဒါမှမဟုတ် အနားမှာ အားပေးခွင့်တောင် မပေးနိုင်တဲ့ ဘ၀ကို လဲ ငါမုန်းတီးမိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အများကောင်းကျိုးအတွက် သတိရှိရှိနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ မင်းလို
မိန်းမအာဇာနည်ရဲ့ခင်ပွန်းသည်ဖြစ်ရတာကိုတော့ ကိုယ် အမြဲတမ်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
၁၉၉၅ ခု ရဲ့နေ့ တစ်နေ့ မှာ ဖုန်းထဲက
နေ မင်းအသံကို စကြားလိုက်ရပြီး၊ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘ၀ကနေ လွတ်မြောက်လာပြီလို့ 
သိလိုက်ရတော့ ကလေးနှစ်ယောက်ကို လက်ဆွဲပြီး ကိုယ်တို့ တွေ ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ မြန်မာပြည်
ကို အပြေးသွားခဲ့ကြတယ်။ သားငယ်ကင်မ် က လူပျိုကြီးဖားဖား ဖြစ်နေတာကို မြင်တော့
အပြင်မှာတွေ့ရင်တောင် ရုတ်တရက်မှတ်မိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မင်းပြောခဲ့သေးတယ်နော်။ စုရေ
..တယောက်တည်း အကျယ်ချုပ်ဘ၀နဲ့ နေခဲ့ရပေမယ့် မင်းဟာ အရင်ကထက်တောင် ပိုပြီး
တည်ငြိမ်လာတာကို သတိထားမိပါတယ်။ ပန်းတွေပန်ထားတဲ့ နူးညံ့တဲ့ အပြုံးအောက်က ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ
့သံမဏိစိတ်ဓာတ်တွေကို ကိုယ်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးပါဝင်တဲ့
မင်းရဲ့အသင်းသူ၊ အသင်းသားတွေကို ဦးဆောင်မှုပေးနေတာ မြင်ရတော့ ငါတို့ မိသားစုတွေ
ကွဲကွာနေကြရတာ အလကား မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ကိုယ်ကျေနပ်ခဲ့မိပါတယ်။ အဲဒီ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဟာ မင်းနဲ့ ကိုယ်နဲ
့ နောက်ဆုံးတွေ့ ခဲ့ကြရတာပဲနော်။ ၁၉၉၈ ရောက်တော့ ကိုယ့်မှာ ကင်ဆာဖြစ်နေပြီ၊
နောက်ဆုံးအဆင့်လို့သိလိုက်ရတော့ ကိုယ်အရမ်းကို ချောက်ခြားသွားတယ်။ လူ့လောကကြီးထဲ
နေရဖို့အချိန်သိပ်မကျန်တော့လို့ ၊ မသေခင်မှာ မင်းကို လူချင်းတွေ့ ပြီး နှုတ်ဆက်သွားချင်တယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာသံရုံး ကို သွားပြီး ဗီဇာလျှောက်ထားပေမယ့် ခွင့်မပြုခြဲ့ကဘူး။ မြန်မာအစိုးရရဲ
့ ဗီဇာငြင်းပယ်မှုကို အားမလျော့ပဲ ကိုယ် ထပ်ကြိုးစားပေမယ့် နောက်ဆုံး အကြိမ်ပေါင်း
၃၀လောက်ရှိလာတော့ ကိုယ်အားလျော့လာမိပြီ၊ ခန္ခာကိုယ်က လဲ သိသိသာသာ ကို
အားနည်းလာတယ်၊ ကိုယ့်အဖြစ်ကို စာနာပြီး ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနဲ့အမေရိကန်သမတ ကလင်တန်တို
့အပါအ၀င် တခြား မိတ်ဆွေတွေက မြန်မာအစိုးရဆီကို မေတာရပ်ခံစာ ရေးခဲ့ကြပေမယ့်
ဗီဇာမရခဲ့ပါဘူး။ ဆိုးဝါးရက်စက်လှတဲ့ ကံကြမ္မာကို ပဲ ကိုယ်တို့အပြစ်တင်ခဲ့ကြရတယ်။ မင်းဆီကို
စစ်အရာရှိတစ်ယောက်က လာတွေ့ ပြီး ကိုယ်နဲ့လာတွေ့ဖို့အင်္ဂလန်ကို
အချိန်မရွေးပြန်နိုင်ကြောင်း၊ လိုအပ်တဲ့ ဗီဇာကို ချက်ခြင်းထုတ်ပေးမယ့် အကြောင်းလာပြောတယ်ဆိုတာ
ပြောရင် မသေခင်၊ ဝေဒနာတွေ ခံစားနေရချိန် မှာ မင်းကို အနားမှာ
သိပ်ရှိနေစေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်က နေထွက်လာပြီးရင် ပြည်ဝင်ခွင့်အပိတ်ခံရမှာ
မို့မင်းကိုယုံကြည်အားထားနေတဲ့ ပြည်သူလူထု ကို မင်းဘယ်လို အင်အားနဲ့ မှ
ထားရက်ခဲ့နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကိုယ်သိနေပြီးသားပါ။ တိုင်းပြည်နဲ့မိသားစုအရေး
ပြတ်ပြတ်သားသား ရွေးချယ်ရမယ့် အခြေအနေတစ်ခု ကို စစ်အစိုးရက အတင်းဖန်တီးနေခဲ့ပေမယ့်၊
ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်က အဲဒီလို အဖြစ်မခံခဲ့ကြဘူးနော်။ ကိုယ်တို့ချစ်သူတွေ
မဖြစ်ခင်ကတည်းက တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူတွေသာလျှင် ပဓာန ဆိုတာ
နှစ်ယောက်စလုံးနားလည်သဘောတူခဲ့ပြီးသားမို့ ၊ မင်းပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို
ကိုယ်တို့ ဆွေးနွေးစရာတစ်ခု အနေနဲ့ တောင် မယူဆခဲ့ကြဘူး။ စုရေ.. ကုစရာဆေးမရှိတဲ့
ကင်ဆာရောဂါကြောင့် နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ ဝေဒနာတွေကို အံကြိတ်ခံစားရင်း...ဗြိတိသျှသံရုံးကနေ
တဆင့် မင်းဆက်လာမယ့် ဖုန်းကို မျှော်ရင်း၊ ပြန်ဆုံကြမယ်လို့ ကြိုးစားပြီး
အားခဲနေခဲ့ပေမယ့်၊ ကိုယ် လမ်းတောင် ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်လောက်အောင် အားအင်တွေ
ချိနဲ့ လာနေပြီ။ တကယ်လို့ကိုယ်သေသွားခဲ့ရင် ကိုယ့်ကို လာမတွေ့နိုင်တဲ့အတွက်
မင်းစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ ၊ ကိုယ်တို့ မိသားစု အနစ်နာခံကြရတာတွေ အချည်းနှီးမဖြစ်ပါစေနဲ
့။ မင်းကို ပိုပြီးလိုအပ်နေကြတဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကို
ကြည့်ပါနော်။ ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရလာပြီး နောင်လာနောက်သားတွေ
ကောင်းစားတာကို ကိုယ်မြင်တွေ့ သွားချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် အမြင်တွေ က
ေ၀၀ါးလာနေပြီ..အသက်ရှုရတာလဲ ပိုပြီးခက်လာတယ်...ဟိုး ခပ်ဝေးဝေး မှာ အပြေးလှမ်းလာနေတဲ့
မင်းရဲ့ပုံရိပ်ကလည်း ဝေးလို့ ဝေးလို့ကျန်နေခဲ့ပြီ.....
အမြွာညီအစ်ကို အန်ထော်နီရဲ့ပြောကြားချက်အရ ဒေါ်စု က ခင်ပွန်းဖြစ်သူ
မိုက်ကယ်အဲရစ်မသေခင် နှုတ်ဆက်စကားပြောတဲ့ ဗီဒီယို အခွေ ကို ဗြိတိသျှသံရုံးကနေ
တဆင့် မိုက်ကယ့်ဆီကို ပို့ ပေးခဲ့ပေမယ့် အဲဒီခွေဟာ မိုက်ကယ်ဆုံးပြီး ၂ရက်အကြာမှ
ရောက်လာခဲ့တဲ့ အတွက် မိုက်ကယ်ကြည့်ခွင့်မရလိုက်ဘူးလို့ သိရပါတယ်) ၀န်ခံချက်၊ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မိုက်ကယ်အဲရစ်အကြောင်း ကျွန်မဖတ်ဖူးသော စာများမှ အချက်အလက်များကို
ကိုးကားပြီး မိုက်ကယ်အဲရစ်နေရာမှ ခံစားရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစုံတရာ အမှားအယွင်းရှိခဲ့ပါက စာရေးသူရဲ့ တာဝန်သာဖြစ်ပါကြောင်း။ 1. 1 1. The untold love
story of Burma's Aung San Suu Kyi By
Rebecca Frayn (Telegraph, Dec 11, 2011) 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Aris
http://littlevoicefromburma.blogspot.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
12/29/2011 11:06:00 AM
မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှု အတွင်းမှဓါတ်ပုံများ (နှလုံးရောဂါရှိသူများမကြည့်ရ)
နံနက် (၉)နာရီတွင် သိရှိရသော သတင်းအရ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၇၈) ဦး ရှိပြီး၊ သေဆုံးသူ (၁၇)ဦးရှိကြောင်း သိရှိပါသည်။ ဒဏ်ရာရသူ (၇၈)ဦးတွင် (၃၃)မှာ မီသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူ (၁၇)ဦးအနက် (၆)ဦးမှာ မီသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ အခင်ဖြစ်ပွားရာနေရာ၌ ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံ (၃၇)လုံး ရှိသည့်အနက် (၁၆)လုံးမှ မီးလောင်ကျွမ်းမှုတွင် ပါဝင်သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ မီးလောင်ကျွမ်းမှုတွင် မီးသတ်ယာဉ် (၂)စီးလည်း ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ By: သစ်ထူးလွင်
အမေစု နဲ့အိုင်စီ တေးဂီတအဖွဲ့ တွေ့ ဆုံပွဲ (ရုပ်/သံ)
ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်၌ အိုင်စီ တေးဂီတအဖွဲ့ မိသားစုဝင်များ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံ ခဲ့ကြပါတယ်။ တေးသံရှင် ကိုလေးဖြူ
မှလည်း ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် တိုင်းရင်းသားဒေသ လူမျိုးများ ပညာရေး ရန်ပုံငွေပွဲသို့ ဧည့်သည် အဖြစ်နဲ့ လာရောက်မည်ဖြစ်ပီး ၊ အဆင်ပြေပါက တက်ရောက်
12/29/2011 08:37:00 AM
ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ မီးလောင်မှု မြင်ကွင်း (ရုပ်/သံ)
ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက်၊ ကူးတို့ဆိပ်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်ချောင်း အနီးမှာ ရှိတဲ့ ဂိုထောင်တွေ မီးလောင် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပါတယ်။
၂၉-၁၂-၂၀၁၁ နေ့ ၀၁း၁၅ နာရီခန့်မှာ စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး ၀၂း၀၀ နာရီမှာ ကျယ်လောင်တဲ့ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းပေါက်ကွဲသံဟာ ရန်ကုန်မြို့ မြို့နယ်
အတော်များများ ပုဇွန်တောင်၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ကျောက်တံတား၊ ပန်းဘဲတန်း၊ တာမွေ၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကင်း၊ တောင်ဥက္ကလာ၊ ကမာရွတ်၊ စမ်းချောင်း၊ သာကေတ၊ ဒေါပုံ၊
သင်္ကန်းကျွန်း စတဲ့ မြို့နယ်က တိုက်ခန်းတွေ လှုပ်ခါခဲ့ပါတယ်။ ပေါက်ကွဲလွင့်စင် ထွက်လာတဲ့ အရာတွေ ထိမှန်ပြီး အနည်းဆုံး ၄၀ ဦးထက် မနည်း သေဆုံးတယ်လို့
ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်နေသူ ကြက်ခြေနီ တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ ပုဇွန်တောင် ချောင်းအတွင်း ဆိုက်ကပ်ထားတဲ့ စက်လှေ၊ သမ္မာန်တွေပေါ်က လူတွေကော၊
လှေတွေပါ တော်များများ ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ ပေ ၁၀၀၀ ၀န်းကျင်ခန့် မှာရှိတဲ့ အိမ်များလည်း မီးမလောင်ပေမယ့် ပေါက်ကွဲတဲ့ အရှိန်ကြောင့် ပျက်စီးကုန်ပါတယ်။
မီးသတ်ကား အစီး ၇၀ ခန့် လာရောက် ငြိမ်းသတ်နေပါတယ်။ နံနက် ၀၃း၀၀ နာရီလောက်မှာ မီးညွန့်ကျိုးသွားပါတယ်။ မီးလောင်ပေါက်ကွဲတဲ့ ဂိုထောင်တွေဟာ
အစိုးရပိုင်လား၊ပုဂ္ဂလိကပိုင်လား၊ ဦးပိုင်က ပိုင်တာလား ဆိုတာ မသိရသေးသလို ဘယ်က စလောင်တာလည်း ဆိုတာလည်း မသိရသေးပါဘူး။
12/29/2011 08:25:00 AM
ကြားသိခဲ့ရသည့် ခြောက်ခြားဖွယ် မြည်ဟည်းပါက်ကွဲမှု၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာဂိုထောင်အတွင်း သိုလှောင်ထားသည့် ဆာလ်လဖြူ ရစ်အက်ဆစ်ကန်နှင့် ယမ်းစိမ်းများပေါက်ကွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအခင်းဖြစ် ပွားရာနေရာတွင်ရောက်ရှိနေသည့်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အတည်ပြုပြောကြားသည်။ ပေါက်ကွဲမှူကြောင့်အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင် တာဝန်ကျမီးသတ်ဝန်ထမ်း ၅ဦးပွဲခြင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပြီး တစ်ဦးမှာဆေးရုံတွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရာ မီးသတ်ဌာနမှ အရာရှိ ၊တပ်သား စုစုပေါင်း ၆ဦးအသက်ဆုံးရှူးံသွားခဲ့သည်။ သေဆုံးသူမီးသတ်ဝန်ထမ်းများမှာ တပ်သား မျိုးကျော်ကျော်၊တပ်သားအောင်အောင် ၊တပ်သားသော်ဇင်မျိုးထက် ၊တပ်ကြပ်ပြည်ဇော်ထွေး နှင့်တပ်ကြပ်တင်စိုး တို့ဖြစ်ကြောင်း မီးသတ်အရာရှိတစ်ဦးက 7day news သို့ပြောသည်။
နောက်ဆုံး စာရင်းအရ ဒဏ်ရာရရှိသူ ကျား( ၆၂ )ဦး၊ မ( ၁၆)ဦး ရှိပြီး သေဆုံးသူဦးရေ ကျား( ၁၂) ဦး မ (၅)ဦးနှင့် မီးသတ်ဌာနမှ ၆ ဦးအပါအ၀င်စုစုပေါင်း ၂၃ ရှိပြီဖြစ်သည်။
12/29/2011 07:54:00 AM
ပါကစ္စတန်ဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို နမူနာယူရမယ်လို့ သမ္မတ ဇာဒါရီ ပြောကြား
12/29/2011 07:03:00 AM
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မှာ ပေါက်ကွဲမှုနှင့်အတူ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွား သေဆုံးဒဏ်ရာရသူများပြား
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက်တွင် ပေါက်ကွဲမှုနှင့်အတူ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ABC စက်ဆန်းရှိ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံ ဂိုထောင်များ ပေါက်ကွဲမီးလောင်မှုကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ ပေါက်ကွဲမီးလောင်မှုကြောင့် ပေ ၅၀ ၀န်းကျင်မှ ပြိုကျနေသည့် နေအိမ်များ
အဆိုပါပေါက်ကွဲလောင်ကျွမ်းမှုကြီးကြောင့် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးရှိ နေထိုင်သူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူများလည်းရှိသည်။ ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်နှင့် မည်မျှထိခိုက်ဆုံးရှုံးသည်ကို
အတိအကျ သိရှိရခြင်း မရှိသေးပါ။ ဒဏ်ရာရရှိသူများကို နီးစပ်ရာကားများဖြင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ထားရကြောင်းလည်း သိရသည်။(ယခုအထိ မီးလောင်ကျွမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ၂၉- ၁၂ - ၂၀၁၁ နံနက် ၃ နာရီ ၄၀ မိနစ်အထိ )
''ကျွန်တော်တို့ အိပ်နေတုန်း ၀ုန်းကနဲဆို အိမ်က ပြိုဆင်းသွားတယ်။ အိမ်ထဲကနေ ကမန်းကတန်းထွက်ပြီး နီးစပ်ရာမှာ မြစ်ကမ်းဘေးမှာ ၀ပ်နေရတယ်။ ကျန်တဲ့သူတစ်ချို့ကတော့ အုတ်နံရံစတွေ လွင့်ပျံ့ထွက်လာတာနဲ့ ထိခိုက်မိပြီး သေသူသေ၊ ဒဏ်ရာရသူရ၊ လဲသူလဲနဲ့ နေရာအနှံ့ ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီဂိုထောင်ရဲ့ ပတ်ပတ်လည်မှာနေတဲ့သူအားလုံးနီးပါး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်။ ဂိုထောင်ဘေးက လမ်းခြားနေတဲ့ အိမ်တွေတောင် ဘာမှမသိ လိုက်ရဘဲ လွင့်ထွက်လာတဲ့ အပိုင်းအစတွေကြောင့် ပြိုကျကုန်တဲ့အထိ အရှိန်က ပြင်းလွန်းတယ်။ ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်း ဒေါပုံဘက်အခြမ်းမှာနေတဲ့ သူတွေကိုတောင် လွင့်စင်လာတဲ့အပိုင်းအစတွေ ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်'' ဟု ဂို ထောင်ဘေးတွင် နေထိုင်ကာ ယခုဖြစ်စဉ်အား ကိုယ်တွေ့ကြုံတွေ့ခဲ့သူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးရရှိသော သတင်းများအရ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် လတ်တလော စာရင်းကောက်ခံမှုအရ ၁၄ ဦးသေဆုံး(ကျား ၇၊ မ ၄၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦး)ပြီး ၅၅
ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိထားကြောင်း နံနက် ၄ နာရီ ရရှိသော သတင်းများအရ သိရှိရသည်။